COVID-19 inoenderera ichishamisika: Mishonga kwete bullet yesirivha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » COVID-19 inoenderera ichishamisika: Mishonga kwete bullet yesirivha
avhiyesheni • Bhizinesi Kufamba • Health News • Investments • Kuwait Kuputsa Nhau • nhau • Nigeria Breaking News • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mishonga inobetsera kudzivirira covid-19
Richard Maslen weCAPA - Center for Aviation, akaita hurukuro mhenyu yakanangana necheni yezvifambiso muMiddle East ne Africa.
Sezvakaita chirwere checoronavirus chakasvika pasina yambiro, iyo DNA ichichinja nekuwedzera shanduko, inoratidza kuti inogona kuramba ichitishamisa.
Iine miganho yakavharwa zvine mutsindo uye zvisina kukosha zvekutadziswa kufamba, zvinoreva kuti kubhururuka kwenyika dzese kunoramba kuripo zvakanyanya.
CAPA yakanga yayambira kuti kuuya kwejekiseni kwaisazove sirivheri bara.
Hurukuro yaRichard Maslen inotarisa zvimwe zviitiko zvechangobva kuitika kumatunhu ese uye zvinotarisa zvakadzama pamusika chaiwo mune yega yega. Mwedzi uno, tarisiro iri paKuwait neNigeria uye nei mushonga weCOVID-19 isiri bara yesirivha. Richard anotanga:
Mushure mekupinda gore pamwe pamwe netarisiro yetariro yakanyanya yatakaona kwemwedzi yakawanda, chokwadi chemwedzi miviri yadarika chakatiyeuchidza kuti hapana chingatorerwe. Kungofanana nedenda rekoronavirus rakasvika pasina yambiro, shanduko yaro yeDNA ine shanduko inowedzera, inosimbisa kuti kunyange isu tichitenda kuti tinogona kunge tave kuzonzwisisa hutachiona hunouraya, zvinogona kuramba zvichitishamisa. Munzvimbo zhinji dzepasi rose mafungu matsva edenda akareva kuti kuve nekunakidzwa nerusununguko rwechinguva chipfupi, mitemo yakaoma yakagadziriswa zvakare ichitadzisa kufamba.
Iine miganhu yakavharwa zvakanyatsoita uye isingakoshe kufamba kwekutadziswa zvinoreva kuti kubhururuka kwenyika dzese kunoramba kwakanyanyisa. Asi, isu tiri kushamisika chaizvo?
pano kuCAPA isu tanga tayambira kuti kuuya kwemishonga yekudzivirira hakuzove bara yesirivha. Icho chinomiririra yakakosha nhanho kune iyo nyowani post-COVID yenyika, asi izvo zvichiri zvinoramba zviri chinhambwe kure. Nhau yakanaka mugungwa renhau dzakaipa yaive yakaita segwenga chitsuwa oasis uye yakatinyengedza isu mukutenda hupenyu hwaizoita zvirinani. Zvichadaro, asi chokwadi chiripo ndechekuti icharamba iri yakareba-kwenguva uye izvozvi zvinhu zvingangodaro zvakanyanya kuomarara kupfuura nakare nendege dzenyika uye mazhinji mabhizinesi zvikamu zvavanoita basa rakakosha kutsigira. Mazhinji ndege dzendege dzave kutangazve mashandiro kune imwe nhanho, asi izvi zvinoramba zviri pamatanho zvakanyanya pazasi peavo vakaonekwa pasati paitika dambudziko rehutano hweveruzhinji. Zvirambidzo zvemumigwagwa munzvimbo yekudzivirira kuenderera mberi kwekupararira kwe COVID-19 uye mamwe mafungu ehutachiona anoramba achikanganisa kupora kwenyika, kunyangwe kufamba mudzimba kwakaratidza zviratidzo zvakanaka zvekudzoka
Middle East inonyanya kukanganiswa nezvirambidzo zvinoenderera mberi zvekufamba nenyika pamwe nendege dzayo hombe dzaimboshanda netiweki dzinopararira pasirese uye dzinovimba nevatakuriri vekunze.
Page 1 pamusoro 7 Prev Next